तनहुँका ६ तहमा मोबाइल एप्स
तनहुँका ६ स्थानीय तहले मोबाइल एप्स बनाएका छन् । १० स्थानीय रहेको जिल्लाका सबै नगरपालिकाले मोबाइल एप्स बनाइसकेका छन् । व्यास नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र भानु नगरपालिकाको मोबाइल एप्स सञ्चालनमा आइसकेको छ । देवघाट र म्याग्दे गाउँपालिकाले मात्रै मोबाइल एप्स बनाएका छन् भने आँबुखैरेनी, बन्दीपुर, रिसिङ र घिरिङ बाँकी छन् । व्यासको मोवाइल एप्स बिहीबार तयार भएको छ । व्यास नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाका बारेमा गुनासो भए मोबाइल… पुरा पढौ
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वर्ड क्याम्प
वर्डप्रेस पोखराको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वर्डक्याम्प पोखरा २०१८ शनिबार भएको छ । २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष काठमाडौंमा वर्डक्याम्प हुनेगरेको थियो । नेपाल राजधानी बाहिर पोखरामा पहिलो पटक यो कार्यक्रम भएको हो । विश्वमा निर्माण हुने वेबसाइटमध्ये ३० प्रतिशत बढी वर्डप्रेस प्रयोग गरी बनाइन्छ । कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ६० प्रतिशत बढी हिस्सा वर्डप्रेसले ओगटेको बताइन्छ । वर्डप्रेसबारे जानकारी दिन क्याम्प आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक पितमबहादुर सेनले बताए । सामुुदायिक हितका लागि… पुरा पढौ
वर्डप्रेस पोखराको आयोजनामा पोखरामा पहिलो पटक हुने ‘वर्डक्याम्प पोखरा–२०१८’ को तयारी पूरा भएको छ। सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष काठमाडौंमा आयोजना हुँदै आएको वर्डक्याम्प राजधानी बाहिर पोखरामा पहिलो पटक हुने भएको छ। विश्वमा निर्माण हुने वेवसाइटको ३० प्रतिशत बढी वेबसाइट वर्डप्रेस प्रयोग गरी बनाइने र कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ६० प्रतिशत बढी हिस्सा वर्डप्रेसले ओगटेकोले यसका बारेमा वृहत् चर्चा परिचर्चाका लागि क्याम्प आयोजना गर्न लागिएको डिजाइन संयोजक निरज पुनमगरले बताए। सामुुदायिक… पुरा पढौ
इलेक्ट्रिक स्कुटर पोखरामा
उकालो होस् कि ओरालो मज्जाले तानोस्, हेर्दा गज्जबको लुक्स होस्, मूल्य पनि धेरै नपरोस् । दैनिक खर्च भइरहने पेट्रोल पनि हाल्नु नपरोस् । यस्तो स्मार्ट सवारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यस्तो सवारी तपाईको रोजाइ हो भने तपाईको छनौट सहरमा आइपुगेको छ । माछापुच्छ«े अटोमोबाइल्स सिमलचौर पोखराले यस्तै विशेषता भएका विभिन्न मोडेलका स्कुटर बिक्री सुरु गरेको छ । रिमोर्टबाट पांग्रा लक गर्न मिल्ने, ब्याक गियरसमेत भएका यस्ता स्कुटर राजधानीपछि पोखरामा भिœयाइएको हो… पुरा पढौ
के तपाईं लेख्न रुचाउनुहुन्छ ? के तपाई आफ्नो लेखलाई घर बसी–बसी कमाउने माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ रु त्यो पनि लाखौंमा १ त्यसो भए आजैबाट लेख्न थाल्नुहोस् । अनलाइनका माध्यमबाट तपाईं आफ्नो लेखलाई नगदमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ । इन्टरनेटको पहुँच, फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले पाठकसम्म लेख पुग्ने सहजता तथा गुगल एडसेन्सलगायतका विज्ञापनदातासँग सहजै जोडिन सकिने कारणले लेखबाट घर बसी–बसी सजिलै कमाउन सकिने भएको हो । सुरुवात कसरी गर्ने ? यसका लागि सुरुमा… पुरा पढौ
सूचना प्रबिधिको बिकाससंगै स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता,सम्पति कर, भूमिकर लगायत राजस्वको नगदी रसिद कम्पयुटरकृत र अनलाइन पद्दतिबाट सुरु गरेको छ । भौगोलिक विकटताका बाबजूद २०७४।०७५ मै ६ वटै वडा कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । इन्टरनेटको विस्तार संगै सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुमा अनलाइन पद्दतिबाट कामहरु सुरु भएका छन्। स्थानीय जनतालार्इ छिटो,छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्न,संस्थागत स्मरणलार्इ चुस्तराख्न पेपरलेस र अनलाइन पद्दतिमा काम सुरु गरिएको प्रमुख… पुरा पढौ